Abenzi nabaphakeli bejubane eliphakeme - China Ifektri Yesivinini Esiphezulu
I-DAYA iqonde i-double crank punch cindezela i-VS Okunye okuqondile imishini ye-crank double Daya cindezela iDaya press: ngeplatifomu nokuphepha kocingo, okulula ukugcinwa kwe-clutch nokushintsha kwamafutha okupholisa, ibhande lezimoto eliyinhloko likhululekile futhi lilula ukukulungisa, futhi lilungele ukugcinwa okulandelayo . Iphephe futhi ilula ngokwengeziwe. Okunye ukucindezela Okunye ukucindezela: Ngaphandle kwesikhulumi sesondlo. Ukugcinwa kwe-Clutch, ukufaka uwoyela opholile, ukulungisa okuxekethile kwebhande lezimoto eliyinhloko, njll. Whi ...
Incazelo DAYA ohlangothini oqondile crank punch cindezela VS Olunye uhlangothi iqonde double crank imishini Daya cindezela Daya cindezela: nge yesikhulumi kanye nokuphepha kocingo, esivumelana nokugcinwa bamba kanye ushintsho uwoyela Ukupholisa, main motor ibhande kuyinto okuxekethile futhi kulula ukulungisa, futhi evumelana okwalandela isondlo. Iphephe futhi ilula ngokwengeziwe. Okunye ukucindezela Okunye ukucindezela: Ngaphandle kwesikhulumi sesondlo. Ukugcinwa kwe-Clutch, ukushintshwa kukawoyela opholile, ukulungiswa okuxekethile kwemoto enkulu ...
Izici zokusebenza 1. Uhlaka lwenziwe ngensimbi ephezulu yensimbi kanye nesakhiwo se-gantry esihlanganiswe ngobuningi, esivimbela inkinga yokuvulwa kwe-fuselage ngaphansi komthwalo, futhi ibona ukucutshungulwa kwemikhiqizo ephezulu kakhulu; 2. Umhlahlandlela wesikhungo se-axis ophindwe kabili, izinsika ezine zomhlahlandlela ziqondisa ubude bonke, ngakho-ke ngisho nomthwalo we-eccentric ungagcina ukunemba okuhle kakhulu futhi wandise impilo ye-punch; 3. Kusetshenziswa uhlelo lokuthanjiswa okuphoqiwe nolwe-oyela lokunciphisa amafutha ...
Incazelo Izinzuzo Umhlahlandlela weSilayidi Inzuzo 1: Isitimela sesilayidi sisebenzisa "ukucisha imvamisa ephezulu" kanye "nenqubo yokugaya ujantshi": Ukucisha imvamisa ephezulu: ubulukhuni bufinyelela ngenhla kwe-hrc48, inqubo yokugaya ujantshi: ukuphela kobuso kungafinyelela kuRa0.4, ubulukhuni bunje ephakeme njengo-0.01mm / m2, ngokuvamile eyi-03mm / m2. Izinzuzo: ukugqoka okuncane, ukunemba okuphezulu, isikhathi eside ukugcina ukunemba nokwenza ngcono impilo yensiza. Worm gear Inzuzo 2: Tur ...
I-Straight Side High Speed ​​Press YeMotor Stator Kanye neRotor (HHD Series)
Izici zokusebenza 1. Uhlaka lwenziwe ngensimbi enamandla kakhulu. Ngemuva kokukhululeka kwangaphakathi kwengcindezi, okokusebenza kuzinzile futhi ukunemba kuhlala kungashintshi, okulungele kakhulu ukukhiqizwa kokugxivizwa okuqhubekayo; 2.Umhlahlandlela wesitimela esihamba phambili, isakhiwo esisodwa sensika, usebenzisa i-zero iphutha ball bearing ukufaka esikhundleni sendabuko ipuleti yesakhiwo, ukuze kunciphise ukungqubuzana okunamandla, futhi ubambisane nokuthanjiswa okuphoqelelwe ukunciphisa ukushuba okushisayo nokufeza ...